ညမီးအိမ် မှ ကြိုဆိုပါ၏ - နှလုံးသားအာဟာရ
၄နှစ်သားတုန်းက ငါ့ဖေဖေကြီး ဘာမဆို လုပ်တတ်တယ်။
၅နှစ်… ငါ့ဖေဖေကြီး မသိတာ ဘာမှ မရှိဘူး။
၆နှစ်… ငါ့အဖေက မင်းအဖေထက် တတ်တယ်ကွ။
၈နှစ်… တို့အဖေက အကုန်လုံးတော့လည်း အတိအကျ မသိဘူး။
၁၀နှစ်… အဖေတို့ ငယ်ငယ်တုန်းကနဲ့ အခုနဲ့ကတခြားစီပဲ။
၁၂နှစ်… အင်း အဲဒါတော့ အဖေလည်းဘယ်သိပါ့မလဲ ၊ သူက အသက်ကြီးပြီဆိုတော့ ကလေးတုန်းကအကြောင်းတွေ မမှတ်မိနိုင်တော့ဘူး။
၁၄နှစ်… အဖေတော့ ထည့်ပြောမနေနဲ့ ၊ သူက ရှေးရိုးသမားကြီး။
၂၁နှစ်… အဘိုးကြီးလား…ထားပါ ၊ အောက်နေပြီ ၊ လုံးဝအောက်နေပြီ။
၂၅နှစ်… အဖေလည်း နည်းနည်းပါးပါးတော့ သိတယ် ၊ မသိလို့လည်း မဖြစ်ဘူးလေ ၊ လူကြီးပဲဟာ။
၃၀နှစ်… အဖေကိုနည်းနည်းပါးပါး မေးမြန်းကြည့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ် ၊ ဘာပဲပြောပြော သူက အတွေ့အကြုံ အများကြီး ရှိတယ်။
၃၅နှစ်… အဖေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှပဲ ဒီကိစ္စအတွက်ငါတစ်ခုခုလုပ်နိုင်မယ်။
၄၀နှစ်… အဖေသာဆိုရင် ဒီကိစ္စ ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ မသိဘူး ၊ အဖေက အတွေ့အကြုံ စုံတယ် ၊ အမြော်အမြင်လည်း ရှိတယ်။
၅၀နှစ်… ဒီကိစ္စအခုနေသာ အဖေနဲ့ တိုင်ပင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ပေးရပေးရ ငါပေးပါတယ်။ အဖေ့အရည်အချင်းတွေ သူရှိတုန်းက ကောင်းကောင်း သတိမထားခဲ့မိတာ သိပ်နှမြောစရာကောင်းတယ် ၊ တကယ်ဆိုငါ အဖေ့ဆီက အများကြီး ရလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်။
[မူရင်း။ ။ Ann Landers ၏ My Father When I Was…]
“အဲဒီတော့ ရှင်က ကျွန်မကို သတ္တိရှိတယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့” သူမက မေးသည်။
“အင်းလေ…ဟုတ်ချင်လဲ ဟုတ်မှာပေါ့ ၊ ဒါပေမဲ့ သတ္တိရှိတယ်ဆိုတာလဲ အဲဒီလို ရှိလာအောင် နှိုးဆွပေးခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တချို့ကြောင့်လို့ ဆိုရမှာပါ ၊ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်အကြောင်း ကျွန်မ ပြောပြပါ့မယ်”
“လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းက ကျွန်မ စတင်းဖို့ဒ်ဆေးရုံမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတယ် ၊ အဲဒီမှာလီဇာဆိုတဲ့ လူနာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကျွန်မတွေ့ရတယ် ၊ သူကလေးက အင်မတန်ဖြစ်ခဲတဲ့ ရောဂါဝေဒနာဆိုးတစ်မျိုးကို ခံစားနေရတာ ၊ သူ နာလန်ပြန်ထူလာဖို့အတွက်ကအသက်ငါးနှစ်ပဲ ရှိသေးတဲ့သူ့မောင်လေးဆီက သွေးကို သွင်းပေးတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ ရှိတော့တယ် ၊ ဒီမောင်လေးက သူကိုယ်တိုင် သူ့အစ်မရဲ့ရောဂါမျိုး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ထူးခြားအံ့သြဖွယ် ပြန်ကျန်းမာရှင်သန်လာခဲ့သူလေးပဲ။ အဲဒီရောဂါကို ခုခံတွန်းလှန်နိုင်တဲ့ ပဋိပစ္စည်းတွေလဲ သူ့ရဲ့သွေးထဲမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ် ၊ ဆရာဝန်က ဒီကလေးကို သူ့အစ်မရဲ့ရောဂါ အခြေအနေအကြောင်း ရှင်းပြပြီး အစ်မအတွက် သူ့သွေးကို ပေးလိုတဲ့ ဆန္ဒရှိသလားမေးတယ် ၊ ကောင်လေးဟာ ခဏတော့ တွေသွားတာ ကျွန်မ သတိထားမိတယ် ၊ အဲဒီနောက် သက်ပြင်းတစ်ချက် ရှိုက်ပြီး သူပြန်ဖြေတယ် ၊ ‘မမ အသက်ကို ကယ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ပေးပါ့မယ့်’တဲ့”
“အဲဒါနဲ့ သူ့ဆီက သွေးကို သွင်းတဲ့အခါ အစ်မခုတင်ဘေးမှာ သူလဲ ခုတင်တစ်လုံးနဲ့ လှဲရင်း ကြည့်နေတယ် ၊ ကောင်းမလေးပါးပြင်မှာ သွေးရောင်သန်းလာတော့ ကျွန်မတို့ကြည့်နေသူတွေအားလုံး နည်းတူ သူလဲ ပြုံးနေတာပဲ ၊ အဲဒီနောက်တော့ သူ့မျက်နှာလေးက ဖြူရော်ရော်ဖြစ်လာပြီး အပြုံးလေးလဲ ပြယ်သွားတယ် ၊ ပြီးတော့ ဆရာဝန်ကို မော့ကြည့်ပြီး တုန်တုန်ယင်ယင် အသံလေးနဲ့ သူ မေးရှာတယ် ၊ ‘ကျွန်တော် အခု တစ်ခါတည်း သေသွားတော့မှာလား’ တဲ့”
“ကလေးက ငယ်တော့ ဆရာဝန်ရှင်းပြတာကိုကောင်းကောင်း သဘောမပေါက်ဘူး ၊ သူက သူ့အစ်ကအတွက် သွေးပေးရမယ်ဆိုတာ သူ့သွေးအားလုံး ဖောက်ပေးလိုက်ရမယ်လို့ ထင်းထားတာကိုး”
“အဲဒါပါပဲ ၊ သတ္တိစိတ် မွေးပေးတဲ့ အဲဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ တွေ့ခဲ့ရဖူးလို့ ကျွန်မမှာလဲ သတ္တိဆိုတာ ရှိတတ်လာခဲ့တာပါ”
[မူရင်း။ ။ Dan Millman ၏ On Courage]
စာရိုက်ပြီးချိန်။ ။ ည ၄း၁၆ မိနစ် ၊ ၂၇ ရက် ၊ မတ်လ ၂၀၀၈ ခုနှစ်
သူ့နာမည် မာ့ခ် အက္ကလွန်။ သူက တကယ့်ကို ရှားရှားပါးပါး လူစားမျိုး။
မေရီကျောင်းမှာ တတိယတန်း ကလေးတွေ စာသင်ပေးရစဉ်သူ့ကိုကျွန်မ စ,တွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အတန်းသား ၃၄ ယောက်လုံးပင် အလွန်ချစ်စရာကောင်းလှသည်။
သည်အထဲမှာမှ မာ့ခ်က ပို၍ ထူးထူးခြားခြား။
လူက အလွန်သပ်ရပ်သန့်ပြန့်သည်။ အမြဲ ရွှင်ရွှင်ပျပျ တက်တက်ကြွကြွရှိသည်။ တစ်ခါတစ်လေ သူ ဆိုးတတ်သည်။ သို့သော် ဆိုးတာလေးသည်ပင် ရယ်ရွှင်ချင်စရာ။
သူက စကားလည်း အလွန်များသည်။ ဘယ်တော့မှ ပါးစပ်ပိတ်မနေနိုင်။ အတန်းထဲမှာ ဆရာမ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ စကားပြောလျှင် အပြစ်ဖြစ်ကြောင်း သူ့ကိုခဏခဏ သတိပေးရသည်။ သို့သော် သူနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်မ အထင်ကြီးမိရတာ တစ်ခုတော့ ရှိသည်။ အဲဒါက သူ့ကို အပြစ်ဒဏ်ပေးသည့်အခါတိုင်း “ကျွန်တော့်ကို ဆုံးမတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမ” ဟူ၍ တကယ်အရိုးခံ နှင့် ပြန်လည်ပြောဆိုတတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အစတွင်တော့ သူ့စကားက နားထဲမှာ တမျိုးကြီး ဖြစ်နေသည်။ နောက်တော့လည်း နေ့စဉ် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြားရကာ တဖြည်းဖြည်း ရိုး၍သွားသည်။
တစ်နေ့ နံနက်မှာတော့ မာ့ခ်ကို စကားမပြောဖို့ပြောရတာ အကြိမ်ပေါင်း များလွန်းသဖြင့် ကျွန်မ စိတ်မရှည်ဖြစ်ကာ ဆရာမပေါက်စများ ထုံးစံအတိုင်း အမှားတစ်ခုကို ကျူးလွန်မိသည်။ မာ့ခ်ကို စေ့စေ့ကြည့်ကာ “နောက်ထပ် စကားတစ်ခွန်း ပြောရင် မင်းပါးစပ် ကို ပလာစတာ နဲ့ ကပ်ထားမယ်” ဟူ၍ ပြောလိုက်မိခြင်းဖြစ်ပင်။
ဆယ်စက္ကန့်မှပင် မကြာပါ။ “မာ့ခ် စကားပြောနေပြန်ပြီ” ဟူ၍ ချပ်က လှမ်းတိုင် သည်။ အတန်းသားများအား မာ့ခ်ကို စောင့်ကြည့်ပေးရန် ကျွန်မ အကူအညီတောင်းထား သည်တော့ မဟုတ်။ သို့သော် မာ့ခ်နောက်ထပ် စကားပြောလျှင် ဘယ်လို အပြစ်ပေးမည် ဆိုတာ အားလုံးရှေ့မှာ ကျွန်မကြေညာမိခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ ယခုပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီဆိုတော့ ကျွန်မ အပြစ်မပေးဘဲ နေ၍မဖြစ်တော့။
အဲသည်တုန်းကအကြောင်းကို သည်ကနေ့မနက်မှ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလိုကျွန်မ အာရုံထဲ တွင်ပြက်ပြက်ထင်ထင် မြင်နေဆဲဖြစ်သည်။ စားပွဲဆီသို့ ကျွန်မလျှောက်သွားသည်။ အံဆွဲကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖွင့်သည်။ အထဲက ပလာစတာခွေပို ယူသည်။ အစ နှစ်စ ညှပ်သည်။ ပြီး နောက်မာ့ခ်ပါးစပ် ကြက်ခြေခတ် ကပ်ထားလိုက်ပြီး အတန်းရှေ့ပြန်လျှောက်လာသည်။
သူဘယ်လိုနေသလဲ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူက မျက်စိမှိတ်ပြသည်။
‘မှတ်ကရော…အခုတော့ စကားမပြောနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်လား’ ဟုတွေးကာ သူ့ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်မရယ်နေမိသည်။ ကျွန်မ သူ့ဆီပြန်သွားကာ ပလာစတာတွေ ပြန်ခွာပေး လိုက်တော့ တစ်ခန်းလုံး သြဘာသံတွေ ညံသွားသည်။ ပါးစပ်လည်း ဟ၍ရရော သူပြော လိုက်သည့်စကားက ထုံးစံအတိုင်း “ကျွန်တော့်ကို ဆုံးမတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမ” ဟူ၍ပင်။
နောက်နှစ်တွေမှာ ကျွန်မ အလယ်တန်း (Junior High) အဆင့်တက်ကာ သချာင်္ ဘာသာ သင်ရသည်။ နှစ်တွေက အလျင်အမြန်ကုန်လွန်ခဲ့ရာ ဘာမျှပင် ကြာသည်မထင် လိုက်ရဘဲ မာ့ခ်တစ်ယောက် ကျွန်မအတန်းသို့ပြန်ရောက်လာသည်။ လူက အရင် ကထက် ပိုချောလာသည်။ အပြောအဆိုက ယခင်အတိုင်း ယဉ်ကျေးဆဲပင်။ သို့သော် ကိုးတန်းမှာ ကျွန်မသင်သည့် သချာင်္သစ်က အတော်ကြိုးစားပြီး လိုက်ရသည်ဖြစ်ရာ မာ့ခ်တစ်ယောက် အရင်ကလို စကားများများမပြောနိုင်ခဲ့။
တစ်ခုသော သောကြာနေ့တွင်မူ အခြေအနေကနည်းနည်းပိုဆိုးနေခဲ့သည်။ အဲသည် ရက်သတ္တပတ် တစ်ခုလုံး သင်္ချာသစ်သင်ခန်းစာတစ်ခုကို အတန်းသားများ အကြိတ်အနယ် ကြိုးပမ်းတွက်ချက်ခဲ့ကြရသည်။ သင်ခန်းစာက ခက်တော့ ကလေးတွေ စိတ်ပင်ပန်းကာ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦးလည်း ခါတိုင်းလိုသည်းညည်းမခံနိုင်ဘဲ အလွယ်တကူ စိတ်တိုနေ ကြသည်။ သို့နှင့် အခြေအနေတွေ သည့်ထက် ဆိုးရွားမသွားမီ ထိန်းသိမ်းရန် အစီအစဉ် တစ်ခု ကျွန်မပြုလုပ်သည်။
ကျွန်မအစီအစဉ်က အတန်းသားတစ်ဦးချင်းအားမိမိ အတန်းဖော်များအမည်ကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နည်းနည်းစီ ချဲ၍ တန်းစီလျက် ဗလာစာရွက်တွင် ရေးချစေသည်။ ထို့နောက် အမည်တစ်ခုစီ၏ အနီးတွင် ချန်ထားသည့် ကွက်လပ် အသီးသီး၌ ၄င်းအတန်းဖော် သူငယ်ချင်းနှင့် ပတ်သက်၍မိမိမြင်သည့် အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုစီကို စဉ်းစားရေးသား ကြစေသည်။ ထို့နေ့က ကျန်ရှိသည့် စာသင်ချိန်လေးမှာ ၄င်းကထင်မြင်ချက်များ ရေးသားကြရင်းပင် ကုန်ဆုံးသွားသည်။ အတန်းပြီးသည့်အခါ ကျောင်းသူကျောင်းသား အားလုံး သူတို့စာရွက်ကလေးတွေ ကိုယ်စီ ကျွန်မဆီ အပ်ပြီး ပြန်ကြသည်. ချပ်က ကျွန်မကို ပြုံးပြသည်။ မာ့ခ်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း “ကျွန်တော့်ကို ဆုံးမတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၊ အားလပ်ရက်မှာ ဆရာမ ပျော်ရွှင်ပါစေ” ဟူ၍နှုတ်ဆက်သည်။
အဲသည် စနေနေ့မှာ ကျောင်းသားကျောင်းသူတစ်ဦးစီ၏ အမည်ကို စာရွက်လွတ် တစ်ရွက်စီ ထိပ်တွင် ကျွန်မ ရေးထိုးပြီးနောက် ၄င်းတစ်ဦးစီနှင့် ပတ်သက်သည့် အတန်းဖော် သူငယ်ချင်းအသီးသီးတို့၏ မှတ်ချက်များကို စီတန်း၍ ရေးချသည်။ တချို့အတွက် တစ်ရွက် ရေးရသည်။ တချို့အတွက် နှစ်ရွက်။
တနလာင်္နေ့ ရောက်သောအခါ အဲသည်စာရွက်များကို သက်ဆိုင်သူ အသီးသီးသို့ ကျွန်မ ဖြန့်ဝေပေးလိုက်သည်။ သည်စာရွက်တွေ ဖတ်ကာမကြာမီပင်တစ်တန်းလုံး ပြုံးလာ ကြတာ တွေ့ရသည်။
“ဟယ်…တကယ်လား ၊ ငါက သူများတွေဒီကိစ္စ သတိထားမိမယ်တောင် မထင်ဘူး”
“ငါ့ကို သူများတွေ သူများတွေ ဒီလောက်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့ လုံးဝထင်မထားဘူး”
သို့သော် နောက်ပိုင်းမှာတော့သည်စာရွက်များနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူ့ထံကမျှ စကားတစ်ခွန်း တစ်ပါဒ မကြားရတော့ပါ။ စာသင်ချိန်အပြီးမှာသူတို့အချင်းချင်း ဆွေးနွေး ပြောဆိုကြတာ ၊ ဒါမှမဟုတ် အိမ်မှာ မိဘများကို ပြကြ ပြောကြတာတွေတော့ ရှိလေမလား မပြောတတ်ပါ။
သို့သော် အဲသည် ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိ ၊ မရှိဆိုတာက အရေးမကြီးပါ။ အရေး ကြီးသည်က သည်စာရွက်တွေ ပေးလိုက်ပြီးသည့်နောက်ပိုင်း သူတို့တစ်တွေ ပြောင်းလဲ သွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အတန်းသူ အတန်းသားတွေ အားလုံး ရွှင်ရွှင်ပျပျဖြစ်လာကြပြီး တစ်ဦး ကိုတစ်ဦးလည်း ယခင်က နည်းတူ ခင်ခင်မင်မင် ပြန်လည် ဆက်ဆံလာကြပါသည်။
သည်လိုဖြင့် အချိန်တန်တော့လည်း မာ့ခ်တို့ အုပ်စု ကျွန်မလက်က ထွက်ကာ အတန်းသစ် အဆင့်ဆင့်တွေတက်သွားကြပါသည်။
ကြားမှာ နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာခဲ့သည်။ တစ်နေ့ ကျွန်မ အပန်းဖြေခရီးမှ ပြန်လာ တော့ မိဘများက ကျွန်မကို လေဆိပ်မှာ လာကြိုကြသည်။ အိမ်သို့အသွား ကားပေါ်တွင် ရာသီဥတု အကြောင်း ၊ ကျွန်မခရီးစဉ် အတွေ့အကြုံများအကြောင်းတွေ မေးမြန်းပြောဆို လာကြရင်း စကားစ နည်းနည်းပြတ်သွားချိန်တွင် အမေက အဖေ့ဘက် လှည့်ကာ အချက် ပေးသည့် လေသံဖြင့် “အဖေကြီး” ဟု ဆိုလိုက်သည်။ အဖေက ချောင်းတစ်ချက် ဟန့်ကာ စကား စ,သည်။
“အက္ကလွန်းမိသားစု ညတုန်းက ဖုန်းဆက်တယ်”
“ဟုတ်လား ၊ သူတို့နဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာ တောင် နှစ်ပေါင်ကို မနည်းဘူး ကြာပြီနော် ၊ မာ့ခ် တစ်ယောက်လဲ ဘယ်လိုနေသလဲ မသိဘူး” ကျွန်မက ပြန်ပြောလိုက်မိ သည်။
အဖေက တည်ငြိမ်စွာပင် ဆက်ပြောသည်။
“မာ့ခ် ဗီယက်နမ်မှာ ကျသွားတယ်…၊ နက်ဖြန် သင်္ဂြိုဟ်မှာ ၊ သူတို့မိသားစုက သမီးကို အသုဘ လိုက်ပို့စေချင်ကြတယ်”
သည်ကနေ့တိုင်အောင်ပင် အဖေ ကျွန်မအား မာ့ခ်ကွန်လွန်သည့်သတင်းကို လမ်းမကြီးပေါ်က ဘယ်နေရာနားမှာ ပြောပြခဲ့သည်ဆိုတာ ကျွန်မ တိတိကျကျ အမှတ်ရနေ ဆဲ ဖြစ်သည်။
စစ်သည်တော်တစ်ဦး၏ ရုပ်အလောင်းအား စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အဆောင်အယောင် အခမ်းအနားများနှင့် ပြင်ဆင် နေရာချထားပုံကို ကျွန်မ တစ်ခါမျှ မကြည့်မမြင်ဖူးပါ။ မာ့ခ်၏ ရုပ်သွင်က တကယ်ပင် ရင့်ကျက်ခံ့ညား၍ နေသည်။ ကျွန်မ ရင်ထဲတွင်ကား မာ့ခ်ရယ်…မင်း သာ စကားပြောနိုင်မယ်ဆိုရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ပလာစတာတွေအားလုံး ငါ ပေးပစ် လိုက်မှာပါ ဟူ၍သာ ပြောဆိုနေမိခဲ့သည်။
အဲသည်နေ့က ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ မာ့ခ်၏ သူငယ်ချင်းတွေ အပြည့် ရောက်ရှိနေ သည်။ ချာလီ၏ ညီမက တေးသီချင်း သီဆိုသည်။ သင်္ချိုင်းနေရာဘေးမှာ အနေရခက်လှ သည့်အထဲ မိုးက ရွာချပြန်သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးက ထုံးစံအတိုင်း ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပြီး နောက်စစ်သည်တော်တစ်ဦးက ခရာမှုတ်သည်။
ထို့နောက် မာ့ခ်ကို ချစ်ခင်ကြသူများ သူ့ခေါင်းတလား အနီးသို့ နောက်ဆုံးအကြိမ် အဖြစ် ချဉ်းကပ် ဖြတ်သန်းကြကာ သန့်ရှင်းသော ရေစင်တော် ဖျန်းပက်ကြသည်။
အားလုံးနောက်တွင်မှ ကျွန်မ မာ့ခ်ရုပ်ကလာပ်ကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးသည်။ ခေါင်းတလားအနီး ကျွန်မရပ်နေဆဲ စောစောက ခေါင်းထမ်းရာတွင် ပါဝင်သည့် စစ်သား လေးတစ်ယောက် အနားကပ်လာကာ “မာ့ခ်ရဲ့ သင်္ချာဆရာမလားခင်ဗျာ…” ဟု မေးသည်။ ကျွန်မက ခေါင်းညိတ်ပြကာ ခေါင်းတလားကိုပင် မမှိတ်မသုန် ကြည့်နေမိသည်။ “ဆရာမ အကြောင်း သူ အမြဲပြောတယ်” သူက ဆက်ပြောနေသည်။
ဈာပနာ အခမ်းအနား ပြီးသည့်နောက် မာ့ခ်နှင့်တစ်တန်းတည်းတက်ခဲ့သည့် သူငယ်ချင်းတစ်သိုက် ချာလီ၏ လယ်တောအိမ်သို့နေ့လယ်စာ စားရန် သွားရောက်ကြသည်။ အဲသည်မှာ မာ့ခ်၏ အဖေနှင့်အမေ လည်းရောက်နေကြသည်။ ကျွန်မအား တွေ့ရန် စောင့် ဆိုင်းနေကြခြင်းပင်။
“ဆရာမကို ပြစရာတစ်ခုရှိတယ်” မာ့ခ်၏ အဖေက ဆိုကာ သူ့ပိုက်ဆံအိတ်ကို ထုတ်သည်။
“မာ့ခ် ကွန်လွန်တဲ့အချိန် သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ဟောဒီဟာလေး တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုတယ် ၊ ဆရာမ မှတ်မိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်”
သူက ပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖွင့်ကာ နွမ်းကြေစုတ်ပြတ်နေပြီဖြစ်သည့် ဗလာစာရွက်စ နှစ်ခု ကို ဂရုတစိုက် ထုတ်ယူသည်။ စက္ကူစများက ဖြန့်လိုက် ခေါက်လိုက် လုပ်ဖန်များသဖြင့် ခေါက်ရိုးနေရာမှ ပြတ်တောက်ကာ တိပ်စများနှင့်ပင် အကြိမ်ကြိမ်ပြန်ကပ်ထားခဲ့ပုံ ပေါ်နေ သည်။ ကျွန်မ သေသေချာချာပင် ကြည့်စရာ မလိုပါ။ အတန်းဖော် သူငယ်ချင်းများ ရေးသည့် မာ့ခ်အကြောင်းအကောင်းဆုံး မှတ်ချက်တွေကို စုစည်းပေးထားသည့် မှတ်တမ်း စာရွက် များဖြစ်ကြောင်း ကျွန်မသိပါသည်။
“ဒီအတွက် ဆရာမကို အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၊ ဆရာမမြင်တဲ့အတိုင်း သူက ဒီဟာလေးကို သိပ်တန်ဖိုးထားတာ” မာ့ခ်၏ မိခင်က ဆိုရှာပါသည်။
မာ့ခ်၏ အတန်းဖော်တွေ ကျွန်မတို့ အနီးသို့ ချဉ်းကပ်လာကြသည်။ ချပ်က ရှက်ပြုံး ကလေး ပြုံးကာ “ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော့်စာရွက်လေးကို သိမ်းထားပါတယ် ၊ အိမ်က ကျွန်တော့်စားပွဲ အပေါ်ဆုံး အံဆွဲထဲမှာ အမြဲ ရှိတယ်”
“ချာလီကလဲ သူ့စာရွက်ကလေးကို ကျွန်မတို့ လက်ထက်ပွဲ အယ်လ်ဘမ်ထဲမှာ ထည့်ထားခိုင်းတာဗျ” ချာလီ၏ ဇနီးက ၀င်ပြောသည်။
“ကျွန်မမှာလဲ ရှိတယ် ၊ ဒိုင်ယာရီထဲ ညှပ်သိမ်းထားတယ်” မာရီလင်က ဆိုသည်။
ထို့နောက် နောက်ထပ် အတန်းဖော်တစ်ဦး ဖြစ်သူဗစ်ကီက လက်ပွေ့ အိတ်ထဲမှ ပိုက်ဆံအိတ်ကို နှိုက်ဖွင့်ပြီး သူ့စာရွက် ကြေကြေမွမွလေးကို ထုတ်ပြသည်။ “ကျွန်မကတော့ ဒါလေးကို အမြဲ ကိုယ်နဲ့မကွာ ဆောင်ထားတယ် ၊ ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးလဲ သူတို့ စာရွက်တွေ ရိုရိုသေသေသိမ်းထားကြမှာပါ” ဟူ၍သူကဆိုသည်။
သည်ဟာတွေ ကြားရပြီသည့်နောက်တွင်တော့ ကျွန်မ လုံးဝထိန်းထားနိုင်စွမ်း မရှိ တော့ပါ။ အဲသည့်နေရာမှာပင် ထိုင်ကာ ကျွန်မ ငိုချလိုက်မိပါသည်။ မာ့ခ်အတွက်ရော မာ့ခ်ကို နောက်ထပ်ဘယ်သောအခါမျှ တွေ့နိုင်ကြမှာ မဟုတ်တော့သည့် သူ့ သူငယ်ချင်း များ အတွက်ပါ ကျွန်မ ငိုလိုက်မိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
[မူရင်း။ ။ Helen P.Mrosla ၏ All The Good Things]
စာရိုက်ပြီးချိန်။ ။ ည ၁၁း၂၃ မိနစ် ၊ ၂၂ ရက် ၊ မတ်လ ၂၀၀၈ ခုနှစ်
ဘာတွေပဲ ဖြစ်နေနေ ၊ အဖေလာမယ် စိတ်ချ
၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် အာမေးနီးယားပြည်၌ ရစ်ချတာ စကေး ၈.၂ ရှိသည့် အင်အားပြင်းထန်သော မြေငလျင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သည်။ တိုက်တာအိမ်ရာတွေ မြေကြီးမှာ ပြားပြားဝပ်သွားပြီး ၄မိနစ်ပင် မပြည့်သည့်အချိန်အတောအတွင်း လူပေါင်း ၃၀,၀၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရသည်။
အပျက်အစီးတွေ ဖရိုဖရဲ ကစဉ့်ကလျားကြားမှာ ဖခင်တစ်ယောက် ဇနီးသည်ကိုအိမ်မှာ ဘေးမသီရန်မခထားခဲ့ကာ သူ့သားရှိနေမည့် စာသင်ကျောင်းဆီသို့ ပြေးလာသည်။ သို့သော် ကျောင်းဆီရောက်တော့ ကျောင်းက မြေမှာ ပြားချပ်နေပြီ။
ရုတ်တရက်သူ့ရင်ထဲဆို့နင့်ကာ ကယောင်ချောက်ချားဖြစ်သွားသည်။ သည့်နောက်မှာ သားကိုသူပေးထားသည့် ကတိစကားကို ပြန်၍ သတိရသည်။ “ဘယ်ကိစ္စမျိုး ကြုံကြူံသားဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ ၊ အဖေရောက်လာမယ် စိတ်ချ” ဆိုသောစကား။ သူ့မျက်လုံးအစုံထဲမှာ မျက်ရည်တွေအိုင်လာသည်။ သူရှေ့တွင်တစ်ချိန်က စာသင်ကျောင်းရှိခဲ့သော နေရာ၌ အုတ်ပုံအစုအဝေးတစ်ခုရှိနေသည်။ ဘယ်လိုမှမျှော်လင့်နိုင်စရာ မရှိအောင်ပိပြားနေသည့် အုတ်ပုံကြီးတစ်ခု။ သို့သော်သားထံပေးထားခဲ့သည့်ကတိစကားကို သူထပ်တလဲလဲ ပြန်ကြားနေသည်။
စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစားထိန်းကာသူ နေ့စဉ် နံနက်တိုင်း လိုက်ပို့နေကျဖြစ်သည့် သူ့သားငယ်၏ စာသင်ခန်းရှိရာ နေရာကို မှန်းဆ ရှာဖွေသည်။ သားတို့အခန်းသည် အဆောက်အဦး၏ လက်ယာဘက်အပိုင်းနောက်ဘက်ခြမ်းမှာ။
သည်နေရာသို့ သူပြေးသွားသည်။ ပြီး အုတ်ကျိုးအုတ်ပဲ့တွေကို စတင်တူးဆွဖယ်ရှားခြင်း ပြုလေသည်။
သူ ဖယ်ရှားနေဆဲ တခြားမိဘတွေပါ ရောက်လာကြသည်။ “ငါ့သားလေး သေပါပြီ” ။ “အမယ်လေး…ငါ့သမီးလေး မရှိတော့ပါဘူး” စသဖြင့် သောကမီး ၊ ပရိဒေ၀မီးတွေ တောက်လောင်ကာ ငိုကြွေးကြမြည်တမ်းကြသည်။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိသည့် တချို့မိဘများကတော့ (သွေးရူးသွေးတမ်း လုပ်ကိုင်နေဟန်ရှိသော) သူ့အား ကရုဏာသက်ကာ ကျောက်ပျက် အုတ်ကျိုးပုံမှဖျောင်းဖျခေါ်ယူကြသည်။
“အဲဒီလို လုပ်နေလို့ အကျိုးမထူးတော့ပါဘူး ၊ အိမ်သာ ပြန်ပါဗျာ”
“စိတ်ထိန်းမှပေါ့ ၊ ခင်ဗျားမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ၊ ဘာလုပ်လို့ရဦးမှာလဲ” စသဖြင့် ပြောကြသည်။
တချို့ကဆိုလျှင် “ဟေ့လူ…တော်ပါတော့ဗျာ ၊ ခင်ဗျားလုပ်တဲ့အတွက် ပိုတောင်ဆိုးနေဦးမယ်” ဟုပြစ်တင်ကြသည်။
သည်လိုလာပြောသည့်မိဘတိုင်းကို သူက စကားတစ်ခွန်းပဲပြန်ပြောသည်။ “ဒီမှာ…ခင်ဗျား အခု ကျွန်တော်လုပ်နေတာကို ၀င်ကူမလား ၊ မကူဘူးလား ၊ ဒါပဲပြောဗျာ” ဟူ၍။ သည်နောက် အဲသည်လူတွေကို လျစ်လျူရှုကာ သူ့သားကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ပဲ သူဆက်လုပ်သည်။ အုတ်အင်္ဂတေ အစိုင်အခဲတွေ တစ်တုံးချင်းတစ်ဖဲ့ချင်းကောက်ယူဖယ်ရှားသည်။
သည်အချိန် မီးသတ်အရာရှိ ရောက်လာပြီး သူ့ကိုဆွဲထုတ်ဖို့ကြိုးစားသည်။ “မီးတွေ လောင်နေပြီ ဘယ်နေရာကမဆို အချိန်မရွေး ထပေါက်နိုင်တယ်။ ခင်ဗျားအတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့လုပ်လုပ်ပါ့မယ် ၊ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်ပြန်ပါ” ဟု ဆိုသည်။ သားကိုချစ်သော အဖေကတော့ သူ့စကားကို အရေးမထား။ “ခင်ဗျား ကျုပ်ကို ကူညီမလား ၊ မကူညီဘူးလား ၊ ဒါပဲပြောပါ” ဟုပဲပြန်ပြောသည်။
“ခင်ဗျား သွေးရူးသွေးတန်း လျှောက်လုပ်မနေနဲ့ ၊ ခင်ဗျားကြောင့် တခြားလူတွေမှာ အန္တရာယ်ဖြစ်မယ် ၊ အိမ်ပြန်ပါ ၊ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ပါ့မယ်”
ရဲကိုလည်း ခင်ဗျား ကျွန်တော့်ကိုကူညီမှာလားပဲသူပြန်မေးသည်။
သို့သော် ကိစ္စမရှိ။ သူ့ဘာသာ တစ်ကိုယ်တည်းဇွဲနပဲကြီးစွာသူတူးဖော်သည်။ သူ့မှာ အရေးကြီးနေတာတစ်ခုပဲ ရှိသည်။ “ငါ့သားလေး သေပြီလား ၊ အသက်ရှင်နေသေးလား” ဒါသေချာဖို့ လိုသည်။ မျက်မြင်ဒိဋ္ဌ သူတွေ့ရဖို့ လိုသည်။
သူတစ်ယောက်တည်း အုတ်ကျိုး အုတ်ပျက်ပုံကို ဖယ်ရှားသည်။ ၈နာရီကြာပြီး၊ …၁၂နာရီ၊ … ၂၄နာရီ၊ …၃၆နာရီ၊ အဲသည်နောက် ၃၈နာရီမြောက်၌ အုတ်အင်္ဂတေတုံးကြီး တစ်တုံး သူဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးသည့်နောက်တွင် သား၏ အသံကိုကြားလိုက်ရသည်။
ချက်ချင်းပင် သားနာမည်ကို သူသံကုန် အော်ခေါ်လိုက်သည်။
ပြန်အော်သံ ကြားရသည်။ “ဖေဖေ…ဖေဖေလား ၊ သားပါ ဖေဖေရ ၊ သူငယ်ချင်းတွေလဲ သားပြောထားတယ် ၊ ‘ဘာမှမကြောက်နဲ့ ၊ ငါ့အဖေ မသေသေးရင် ငါ့ကိုသေချာပေါက်လာကယ်မှာ ၊ ငါလွတ်ရင် မင်းတို့လဲလွတ်မယ်’ လို့ ၊ ဖေဖေ သားကို ကတိပေးထားတယ် မဟုတ်လား ၊ ‘ဘယ်ကိစ္စမျိုးကြုံကြုံ သားမစိုးရိမ်နဲ့ ၊ အဖေရောက်လာမယ် စိတ်ချ’ ဆိုတာလေ ၊ အခုအဖေ ပြောထားတဲ့ အတိုင်းပဲ ရောက်လာပြီပေါ့”
“အဲဒီ အောက်ထဲမှာ ဘယ်လို အခြေအနေ ရှိလဲသား” အဖေက မေးသည်။
“သားတို့ ၃၃ ယောက်ထဲမှာ ၁၄ ယောက်ပဲ ကျန်တယ် အဖေ ၊ သားတို့ ကြောက်လဲ ကြောက်တယ် ၊ ဆာလဲ ဆာတယ် ၊ ရေးလဲ ငတ်တယ်၊ အဖေ ရောက်လာတာ အရမ်းဝမ်းသားတာပဲ ၊ ကျောင်းကြီးပြိုကျတော့ သားတို့နေရာလေး ကွက်ပြီး တြိဂံပုံ အမြှောင့်လေး တစ်မြှောင့်မပိဘဲ ကျန်နေတယ် ၊ အဲဒါကြောင့် သားတို့ မသေတာ”
“နေဦး ဖေဖေရ ၊ တခြားလူတွေ အရင်ထွက်ပါစေ ၊ သားမှာက ဖေဖေ ရှိနေတာပဲ ၊ ဘယ်လိုကိစ္စမျိုး ကြုံကြုံသားက မစိုးရိမ်ဘူး ၊ အဖေလာကယ်မယ်ဆိုတာ သိနေတယ်”
[မူရင်း။ ။ Mark V.Hansen ၏ Are You Going To Help Me?]
စာရိုက်ပြီးချိန်။ ။ ညနေ ၅း၁၅ မိနစ် ၊ ၂၀ ရက် ၊ မတ်လ ၂၀၀၈ ခုနှစ်
ငါသိတယ် ၊ ငါလုပ်နိုင်ရမယ်
အဲသည်တုန်းက ရော့ကီး အသက်ငါးနှစ်။
သူ့မိခင် ကယ်လီက ပစ်ကပ် ထရပ်ကားလေးကို မောင်းကာ သားအမိနှစ်ယောက် အယ်လဗားမားတောကျေးလက်ကိုဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြသည်။ ရော့ကီးက သူ့ အမေပေါင်ပေါ်ခြေတင်လျက် အိပ်ရင်းလိုက်ပါလာသည်။
လမ်းက ယာဉ်ကြောနှစ်ခုစာလောက်သာ ကျယ်သည့်တောလမ်း။ အကွေ့အ၀ိုက်တွေလည်း များသည်။ ကယ်လီက ကားကိုဂရုစိုက်မောင်းနှင်လာသည်။ သို့သော် တစ်နေရာတွင် လမ်းက ကွေ့သွားပြီး တံတားကျဉ်းကျဉ်းတစ်ခုထဲ ဆက်တိုက်ဝင်ရသည်။ သည်အချိန်ကားက ချိုင့်တစ်ခုထဲ ဆောင့်ကျပြီး လမ်းဘေးဘက်ချောထွက်ကာ ညာဘက်ရှေ့ဘီးက မြောင်းလိုဖြစ်နေသည့် ဘီးလမ်းကြောင်းရာတစ်ခုထဲ ကျသည်။ ကားမှောက်မှာ စိုးသဖြင့် ကယ်လီက လီဗာကို ဖိနင်း ၊ စတီယာရင်ကို ဘယ်ဘက်တအားလှည့်ပြီး ကားကို လမ်းပေါ် ကမန်းကတန်း ဆွဲတင်သည်။ သို့သော် ကံဆိုးချင်တော့ ရော့ကီး၏ ခြေထောက်ကြားမှာ ကန့်လန့်ခံနေသည်။ ပစ်ကပ်ကိုသူမထိန်းနိူင်တော့။
ကားက တစ်ပြန်နှစ်ပြန် လိမ့်ကာ ပေနှစ်ဆယ်ခန့်နက်သည့် ချောက်ထဲ ကျသွားသည်။ ချောက်ထဲ ကားရောက်တော့မှ ရော့ကီး နိုးလာသည်။
“မေမေ…မေမေ၊ သားတို့ ကားဘီးတွေ မိုးပေါ်ထောင်နေပါလား” အမေ့အား သူမေးသည်။
ကာလီ့မျက်စိနှစ်ဖက်လုံး သွေးတွေဖုံးနေသဖြင့် ဘာကိုမှ မမြင်ရ။ ဂီယာတံနှင့် ဆောင့်ထိုးမိသောဒဏ်ကြောင့် နှုတ်ခမ်းက ပါးအထိ ဟက်တက်ကွဲကာ မျက်နှာတစ်ခုလုံး စုတ်ပြတ်ကြေမွနေသည်။ ပခုံးနှစ်ဖက်လုံး ကျိုးကြေသွားပြီး ချိုင်းကြားတစ်ဖက်၌ အရိုးတစ်ချောင်းဖောက်ထွက်နေသည်။ ပြီး ပိန်ချိုင့်သွားသည့်တံခါးက သူ့ခန္ဓာကိုယ်အား ဖိညှပ်ထားသလိုလည်းဖြစ်နေသည်။
“မေ့မေ့ကို သားဆွဲထုတ်ပေးမယ်” ရော့ကီးကဆိုသည်။ အံ့သြဖွယ်ပင်သူက ဒဏ်ရာလုံးဝမရခဲ့။ သူ့အမေအောက်မှတိုးဝှေ့ထွက်ကာ ပွင့်နေသော တံခါးပေါက်မှသူလျှောဆင်းသည်။ ပြီးလျှင် မိခင်အားဆွဲထုတ်နိုင်ရန်ကြိုးစားသည်။ သို့သော် သူမည်မျှ အားစိုက်ဆွဲသော်လည်း ကယ်လီက နည်းနည်းမျှ မရွေ့။
“မေမေ ခဏ အိပ်ပါရစေ သားရယ်” ကယ်လီကဆိုသည်။ သူကသတိလစ်တစ်ချက်မလစ်တစ်ချက်ဖြစ်နေသည်။
“ဟင့်အင်း မေမေ…မေမေ မအိပ်ရဘူး” ရော့ကီးက လုံးဝငြင်းသည်။
ရော့ကီးက ကားထဲ ခဲခဲယဉ်းယဉ်းပြန်ဝင်ပြီး သူ့အမေကို သည်အထဲက မရမက တွန်းထုတ်သည်။ ပြီးနောက် အမေသည်နား ခဏနေခဲ့ ၊ သားလမ်းပေါ်တက်ပြီး တွေ့တဲ့ကားကို အကူအညီတောင်းမယ်ဟုဆိုသည်။ မိခင်ကစိတ်မချ။ မှောင်မှောင်မည်းမည်းထဲမှာ သူ့သားလေးကို ကားမောင်းလာသူတွေမြင်ချင်မှမြင်မှာဟုတွေးကာ သားတစ်ယောက်တည်းမသွားနဲ့ဟုဆိုသည်။
အဲသည်နောက် သားအမိနှစ်ယောက် လမ်းဘေးကမ်းပါးယံကို ဖြည်းဖြည်းချင်း တွားတက်ကြသည်။ ရော့ကီးက အလေးချိန် ပေါင် ၄၀ မျှရှိသည့် သူ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးနှင့် ၁၀၄ ပေါင်လေးသော သူ့မိခင်ကို တွန်းတင်သည်။ ခရီးကမတွင်နိုင်။ တစ်ကြိမ်မှာ တစ်လက်မ နှစ်လက်မ လောက်စီပဲရွေ့သည်။ ဝေဒနာပြင်းထန်းလွန်းသဖြင့် ကယ်လီ လက်လျှော့ချင်လာသည်။ သို့သော်ရော့ကီးက မလျှော့ရ။
သူ့အမေ အားမလျှော့စေရန် ရော့ကီးက “မေမေ ၊ မီးရထားလေးအကြောင်း သတိရ” ဟု ဆိုသည်။ သူတို့ကလေးတွေ အလွန်နှစ်သက်သည့် ‘စွမ်းဆောင်နိုင်သောစက်ခေါင်းလေး’ ပုံပြင်ကို သူဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ စက်ခေါင်းလေးသည် မတ်စောက်သော တောင်ကြီးကို မရရအောင် တက်သွားသည်။ စက်ခေါင်းလေးအကြောင်းမိခင်အား သတိဖော်ပေးရန်အတွက် ပုံပြင်ထဲမှာပါသည့် ‘ငါသိတယ် ၊ မင်းတတ်နိုင်တယ် ၊ ငါသိတယ် ၊ မင်းတတ်နိုင်တယ်’ ဆိုသည့် လူံ့ဆော်စကားလေးကို သူ့နူတ်က တတွတ်တွတ် ရွတ်သည်။
နောက်ဆုံး လမ်းမပေါ်ရောက်ကြပြီး သူ့မိခင်၏ မျက်နှာပေါ်မှ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဒဏ်ရာများကို သေသေချာချာ မြင်ရတော့မှ ရော့ကီး ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုလေသည်။ ထို့နောက် ထရပ်ကားတစ်စီးလာတာ မြင်တော့လက်နှစ်ဖက်ကို ဝှေ့ယမ်းကာ “ရပ်ပါ ခင်ဗျာ ၊ ရပ်ပါ ခင်ဗျာ” ဟု အော်သည်။
“မေ့မေ့ကိုဆေးရုံပို့ပေးကြပါ” ထရပ်ကား မောင်းသူအား သူ မေတ္တာရပ်ခံသည်။
ကယ်လီ၏ မျက်နှာကို ခွဲစိတ်ခန်းမှာ ရှစ်နာရီမျှကြာအောင် ပြန်လည်ပြုပြင်ယူရသည်။ စုစုပေါင်း ၃၄၄ ချက်တိတိ ချုပ်ခဲ့ရသည်။ သို့တိုင်အောင် ယနေ့သူ့မျက်နှာက ယခင်ကနှင့်တခြားစီ ဖြစ်နေသည်။ “အရင်တုန်းကဆိုရင် ကျွန်မ နှာတံလေးက သွယ်တန်းနေတာပဲ ၊ နှုတ်ခမ်းက ပါးပါး ၊ ပါးရိုးပေါ်ပေါ်နဲ့ပေါ့ ၊ အခုတော့နှာခေါင်းပွပွ ၊ နှုတ်ခမ်းထူထူ ၊ ပါးရိုးချပ်ချပ် ဖြစ်နေပြီ”
သို့သော် ဘာပဲပြောပြော အမာရွတ်တော့ သိပ်မပေါ်ပေ။ ထိခိုက် ဒဏ်ရာတွေ အားလုံး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြန်ကောင်းသွားခဲ့သည်။
ရော့ကီး၏ စွမ်းဆောင်ပုံအကြောင်းသည် ဧရာမ သတင်းကြီးတစ်ခု ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ သို့သော် သတ္တိခဲ ချာတိတ်ကတော့ သူ လုပ်ခဲ့တာ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မပါပါဟု ဆိုသည်။ “ဒီကိစ္စကြီး ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို ကျွန်တော် သဘောကျတယ်လို့မထင်ကြပါနဲ့နော် ၊ မတော်တဆ ဖြစ်လာတော့ ကျွန်တော်လဲလုပ်ရတာပေါ့ ၊ ဘယ်သူမဆို ဒီလိုကြုံရင် ဒီတိုင်းလုပ်ကြမှာပဲ မဟုတ်လား”
သူ့ မိခင်ကတော့ ဆိုသည်။
“ရော့ကီးလေး ကယ်လို့သာပေါ့ ၊ မဟုတ်ရင် ကျွန်မ သွေးလွန်ပြီး သေမှာ” ဟူ၍။
[မူရင်း။ ။ Michele Borba ၏ I Think I Can!]
စာရိုက်ပြီးချိန်။ ။ ညနေ ၄း၁၈ မိနစ် ၊ ၁၈ ရက် ၊ မတ်လ ၂၀၀၈ ခုနှစ်
မဟတ္တမ ဂန္ဓီရဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံ
တစ်နေ့ မဟတ္တမ ဂန္ဓီကြီး ခရီးသွားရန် ရထားပေါ်အတက်မှာ သူ၏ ဖိနပ်တစ်ဖက် ကျွတ်ပြီးအောက်ဘက်သံလမ်းပေါ်ကျသည်။ရထားကထွက်စပြုနေပြီဖြစ်ရာသူ ကောက်မယူနိုင်တော့။
ဘေးလူတွေ ငေးကြည့်နေကြဆဲ ဂန္ဓီကအေးအေးဆေးဆေးပင် သူ့မှာ ကျန်နေသေးသည့် ဖိနပ်တစ်ဖက် ကို ချွတ်ကာ စောစောက ကျွတ်ကျခဲ့သည့် နေရာဘက်ဆီသို့ လှမ်းပစ်လိုက်သည်။
“ဟာ…ဘာလုပ်တာလဲ” ခရီးသည်တစ်ယောက်က မေးသည့်အခါ ဂန္ဓီကြီးက ပြုံးပြီး “စောစောက တစ်ဖက်တည်းကောက်ရမယ့်လူ အခုတော့တစ်ရံ ရသွားမှာပေါ့ဗျာ ၊ အဲဒါဆို သူစီးလို့ ရသွားပြီ” ဟု ဖြေလေသည်။
[မူရင်း။ ။ The Little, Brown Book of Anecdotes မှ အမည်မသိစာရေးသူ၏ Shoes]
စာရိုက်ပြီးချိန်။ ။ ညနေ ၄း၅၈ မိနစ် ၊ ၁၇ ရက် ၊ မတ်လ ၂၀၀၈ ခုနှစ်
မကြီးမကျယ်တဲ့ ၊ အမည်အဖော်တဲ့ ၊ အမှတ်တရပြုမနေတဲ့
အကြင်နာ ၊ မေတ္တာ အပြုအမူလေးများပါ။
ကျွန်တော် လူပျိုပေါက် အရွယ်လောက်က ဖြစ်သည်။ အဖေ နှင့် ကျွန်တော် ဆပ်ကပ်ပွဲအတွက် လက်မှတ် တန်းစီနေကြသည်။ အတော်ကြာ စောင့်ဆိုင်းပြီး သည့်နောက်တွင် လက်မှတ်ပေါက်နှင့် ကျွန်တော်တို့ ကြားမှာ မိသားစု တစ်ခုသာ ကျန်လေသည်။
သည်မိသားစုကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တောသဘောကျနေမိသည်။ ကလေးချည်း ရှစ်ယောက် ပါသည်။ တစ်ယောက်မျှ ၁၂နှစ် ပြည့်သေးပုံမရ။ သူတို့အပြင်တွေကြည့်ရုံဖြင့်ပင် ငွေကြေးပြည့်ပြည့်စုံစုံထဲက မဟုတ်ကြောင်းသိနိုင်သည်။ အ၀တ်အစားတွေကအဖိုးတန်ထဲက မဟုတ်။ သို့သော်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိသည်။ ကလေးတွေက အမူအရာယဉ်ကျေးသည်။ မိဘများနောက်မှာ နှစ်ယောက်တစ်တွဲ လက်ချင်းချိတ်ပြီး တန်းစီနေကြသည်။ သို့သော်နှုတ်ကမူ ညဘက်တွင် သူတို့ကြည့်ရမည့်ဆပ်ကပ် လူပြက်များ ၊ ဆင်လိမ္မာများနှင့် အခြားပြကွက်များ အကြောင်းကို အားတက်သရော ပြောဆိုနေကြသည်။ သူတို့လေးတွေခမြာ ဆပ်ကပ်ပွဲ တစ်ခါမျှ ကြည့်ဖူးကြဟန်မတူ။ သည်ညကတော့ သူတို့ဘ၀မှာ တကယ့် အမှတ်တရည ဖြစ်တော့မည့်ပုံမျိုး။
အဖေနှင့်အမေက အုပ်စုထိပ်မှာ ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူသည့် အသွင်အပြင်များဖြင့် ရပ်နေကြသည်။ ကလေးတွေ၏ မိခင်က ခင်ပွန်းသည်၏လက်ကို ကိုင်လျက်သူ့မျက်နှာကို ရွှန်းရွှန်းစားစားကြည့်နေပုံမှာ ‘မေ့ချစ်သူလူစွမ်းကောင်းကြီး’ဟု နှုတ်ခွန်းဆက်သနေဘိသည့်အလား အထင်ကြီးမှု ၊ လေးစားမှုလက္ခဏာတွေ အပြည့်ပါသည်။ ခင်ပွန်းသည်ကလည်း ‘အားကိုးစမ်းပါအချစ်ရယ်’ဟုခွန်းတုံ့ပြန်သည့်နှယ် ဂုဏ်ယူသောအပြုံးနှင့်ချစ်ကြည်နူးစွာကြည့်သည်။
သည်အခိုက် လက်မှတ်ရောင်းသော အမျိုးသမီးက အဖေလုပ်သူအား လက်မှတ် ဘယ်နှစ်စောင်ယူမလဲလှမ်းမေးသည်။
“ကျွန်တော် ကလေးလက်မှတ်ရှစ်စောင်နဲ့လူကြီးလက်မှတ်နှစ်စောင် လိုချင်ပါတယ် ၊ အဲဒါ မှ ကျွန်တော်တို့ တစ်မိသားစုလုံး လာလို့ရမှာ” သူက တက်တက်ကြွကြွပင် ဖြေသည်။
အမျိုးသမီးက လက်မှတ်ခ နှုန်းထားများ လှမ်းပြောသည်။
ဇနီးသည်က သူ့ခင်ပွန်း၏လက်ကို လွှတ်ချလိုက်ပြီး ခေါင်းလည်းငုံ့သွားသည်။ အမျိုးသား၏ နှုတ်ခမ်းတွေတဆတ်ဆတ် တုန်လာသည်။ သူ ရှေ့သို့ အနည်းငယ်တိုးကာ “ဘယ်လောက်ဗျာ”ဟူ၍ မေးသည်။
လက်မှတ်ရောင်းသော အမျိုးသမီးက ဈေးနှုန်းတွေထပ်ပြောသည်။
အဖေလုပ်သူမှာ ပိုက်ဆံ အလုံအလောက်မပါ။
သို့သော် သည်အချိန်ကျမှ သူနောက်ဘက် လှည့်ကာ ကလေးတွေကိုအဖေ့မှာ ပိုက်ဆံ အလုံအလောက်မပါလို့ သည်ည ဆပ်ကပ်ကြည့်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဟု သူဘယ်သို့ ပြောထွက်နိုင်ပါမည်နည်း။
ဖြစ်ပျက်ပုံ အလုံးစုံကို မြင်ကာ ကျွန်တော့်အဖေအင်္ကျီအိတ်ထဲ လက်နှုက်သည်။ ဒေါ်လာ ၂၀ တန် တစ်ရွက် ထုတ်လာပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်အသာပစ်ချသည်။ (ကျွန်တော်တို့လည်း ချမ်းသာသူများ မဟုတ်ကြောင်းကြားဖြတ်ပြောလိုပါသည်။) ထို့နောက် အဖေပဲ သည်ပိုက်ဆံကိုပြန်ကောက်ကာ ကလေးများ ဖခင် ပခုံးကိုသွားပုတ်ပြီး ပြောသည်။ “ဒီမှာခင်ဗျ ၊ စောစောက ခင်ဗျားအိတ်ထဲက ထွက်ကျသွားတယ်”
အဖေဘာလုပ်သည်ဆိုတာ ထိုပုဂ္ဂိုလ် ကောင်းစွာနားလည်လိုက်ပါသည်။ ဘယ်သူ့ဆီကမှ သူ လက်ဖြန့်တောင်းခံခဲ့သည်တော့မဟုတ်။ သို့သော်ဒီလိုအသည်းအသန် အရေးတကြီးအချိန် ၊ ဖခင်တစ်ယောက်အနေနှင့်အရှက်ကြီး ရှက်ရမည့်အဖြစ်မျိုး ကြုံရအံ့ဆဲဆဲ အချိန်တွင် မမျှော်လင့်ဘဲ ပေါ်ပေါက်လာသည့် သည်အကူအညီအတွက် သူတကယ်ပဲ ကျေးဇူးတင်သွားခဲ့သည်။ အဖေ့မျက်လုံးအစုံကို သူ စူးစိုက်၍ကြည့်သည်။ ဒေါ်လာ ၂၀ တန် ကိုင်ထားသော အဖေ့လက်ကို သူလက်နှစ်ဖက်နှင့်ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင်ကာ တုန်ယင်သော နှုတ်ခမ်းများဖြင့်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုသည်။
“ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ ၊ တကယ့်ကိုကျေးဇူးပါပဲ ၊ ကျွန်တော်အတွက်ရော ကျွန်တော့်မိသားစု အတွက်ပါ အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ” သည်လိုပြောရင်းသူ့ပါးပြင်ပေါ် မျက်ရည်တစ်ပေါက် လိမ့်ဆင်းကျလာသည်။
အဖေနှင့်ကျွန်တော် ကားဆီသို့ လှည့်ပြန်ကာ အိမ်သို့ပဲ မောင်းလာခဲ့ကြသည်။ အဲသည်ည ဆပ်ကပ်ပွဲသို့ကျွန်တော်တို့ မသွားကြပါ။ သို့သော် သည်ညသည် အချည်းနှီး ညတော့ လုံးဝမဟုတ်ခဲ့။
[မူရင်း။ ။ Dan Clark ၏ The Circus]
စာရိုက်ပြီးချိန်။ ။ ည ၁၀း၅၆ မိနစ် ၊ ၁၆ ရက် ၊ မတ်လ ၂၀၀၈ ခုနှစ်
ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က လူသူရှင်းသော မက္ကဆီကို ကမ်းခြေတစ်နေရာမှာ သူတွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြောပြသည်။
နေ၀င်ဆည်းဆာအချိန် ကမ်းခြေမှာသူတစ်ယောက်တည်း လျှောက်သွားရင်းက ဟိုးအဝေးဆီမှာ လူတစ်ယောက်လှမ်းမြင်ရသည်။ နည်းနည်းနီးလာတော့ဒေသခံတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုမိသည်။ သူလူကကမ်းခြေသောင်စပ်မှာ ကုန်းကုန်း ကုန်းကုန်းနှင့်သွားနေရာက တစ်စုံတစ်ရာကိ်ု ငုံ့ကောက်ကာ ပင်လယ်ရေထဲလွင့်ပစ်သည်။ သည့်နောက် အဲသည်လိုပဲ နည်းနည်းလျှောက်သွားလိုက် တစ်ခုခုတွေ့လျှင်ကောက်ယူလိုက် လွှတ်ပစ်လိုက် လုပ်နေသည်။
ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေ သူ့အနား ရောက်သွားပြီးသေသေချာချာ ကြည့်တော့လှိုင်းနဲ့ပါလာပြီးသဲသောင်ပြင်ပေါ် တင်ကျန်နေသည့် ကြယ်ငါးတွေကိုရေထဲပြန်ပစ်ထည့်ပေးနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရသည်။
သည်လူ ဘာရည်ရွယ်ချက်နှင့်လုပ်နေသလဲ ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေ စဉ်းစားမရဖြစ်သွားသည်။ သို့နှင့်သူ့ကို နှုတ်ဆက်ပြီး တည့်တည့်ပင် မေးကြည့်သည်။ “မသိလို့မေးပါရစေဗျာ ၊ မိတ်ဆွေဘာလုပ်နေတာပါလိမ့်”
“ကြယ်ငါးတွေ သမုဒ္ဒရာထဲပြန်ပို့ပေးနေတာလေ ၊ ခင်ဗျားမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ၊ ဒီရေကျချိန် သောင်ပြင်ပေါ်မှာ တင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ကောင်တွေဟာရေတက်တဲ့အချိန်ရောက်အောင် ဒီမှာ အကြာကြီး စောင့်နေရမှာ ၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလောက်ကြာရင် အောက်ဆီဂျင် ပြတ်ပြီးသေမှာပဲ”
“ဟုတ်ကဲ့ ၊ အဲဒါတော့ကျွန်တော်လဲ သဘောပေါက်ပါတယ်” ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေက ဆိုသည်။ “ဒါပေမဲ့ ဒီကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာ ကြယ်ငါးတွေထောင်ချီပြီးရှိနေမှာပေါ့ဗျာ ၊ အဲဒီကောင်တွေ အားလုံး ခင်ဗျား ဘယ်လိုလိုက်ကောက်မလဲ၊ တစ်ယောက်တည်းမနိုင်နိုင်ဘူးလေဗျာ ၊ ပြီးတော့ စဉ်းစားကြည့် ၊ ဒီကမ်းရိုးတမ်းတစ်လျှောက်လုံးဆိုရင် ခုလို သဲသောင်ပြင်ပေါင်း ရာချီရှိမှာပေါ့ ၊ ဒီသောင်းစပ်တိုင်းမှာရှိနေမယ့် ကြယ်ငါးတွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ ၊ သူ့သဘာဝနဲ့သူဖြစ်နေတာခင်ဗျား တစ်ယောက်ကြောင့် ဘာတွေ ထူးခြား ပြောင်းလဲသွားနိုင်မလဲ”
ဒေသခံပုဂ္ဂိုလ်က ပြုံးသည်။ နောက်ထပ်ကြယ်ငါးတစ်ကောင် ကောက်သည်။ ထို့နောက် “တခြားကောင်တွေအတွက် မထူးခြားပေမယ့် ဟောဒီ ကြယ်ငါးတစ်ကောင်အတွက်တော့ ထူးခြားသွားတာပေါ့ဗျာ” ဟုဆိုကာ ပင်လယ်ရေထဲ လှမ်းပစ်ထည့်လိုက်သည်။
[မူရင်း။ ။ Jack Canfield နှင့် Mark V.Hansen တို့၏ One At A Time]
စာရိုက်ပြီးချိန်။ ။ မနက် ၂း၁၈ မိနစ် ၊ ၁၄ ရက် ၊ မတ်လ ၂၀၀၈ ခုနှစ်
ကောင်လေး နဲ့ ခွေးလေး
စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်က ဆိုင်တံခါးဝမှာ ဆိုင်းဘုတ်အသစ်တစ်ခု ထပ်ချိတ်သည်။
“ခွေးပေါက်ကလေးများ ရောင်းရန်ရှိသည်” တဲ့။
သည်ကြော်ငြာမျိုးကို ကလေးတွေအလွန် စိတ်ဝင်စားသည်။ သူတို့က ခွေးချစ်တတ်သူများ မဟုတ်လား။ ခဏအကြာမှာပင် ကလေးတစ်ယောက် ဆိုင်ပေါက်ဝသို့ ရောက်လာသည်။
“ခွေးလေးတစ်ကောင်ဘယ်လောက်ရောင်းသလဲခင်ဗျ” သူက မေးသည်။
“ဒေါ်လာ ၃၀ က ၅၀ အထိ ဈေးအစားစားရှိတယ်” ဆိုင်ရှင်က ဖြေသည်။
ကောင်လေး က သူ့ အိတ်ထဲမှာ ရှိသည့် ပိုက်ဆံအကြွေတွေ နှိုက်ထုတ်သည်။ “ကျွန်တော် မှာ ၂ဒေါ်လာ နဲ့ ၃၇ဆင့် ရှိပါတယ်။ ခွေးလေးတွေ ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမလားခင်ဗျ”
ဆိုင်ရှင်ကပြုံးသည်။ ထို့နောက် ခွေးအိမ်ထဲမှာရှိနေသည့် ခွေးမကြီးကို လေချွန်ပြီး ခေါ်လိုက်သည်။ ခွေးမကြီး ဆိုင်ခန်းထဲပြေးဝင်လာတော့ သူ့နောက်က ခွေးပေါက်ကလေး ငါးကောင်တန်းစီ၍ လိုက်ပါလာသည်။ ပိစိကွေးလေးတွေ ၊ အမွေးက သိတ်ရှည်တော့ တစ်ကိုယ်လုံးအမွေးတွေဖုံးကာ လုံးနေသည်။ အဲသည်အထဲမှ တစ်ကောင်က ဟိုးနောက်မှာပြတ်ကျန်ခဲ့သည်။ သူက ထော့တီး ထော့နဲ့ နှင့် လမ်းမလျှောက်တတ်သလို။
ကောင်လေးက သည်ဟာလေး မြင်တော့ချက်ချင်းစိတ်ဝင်စားသွားသည်။
ခွေးလေးမှာ မွေးကတည်းကတင်ပါးဆုံ အရိုးခွက်ပါမလာသဖြင့် တစ်သက်လုံးခြေထော့နဲ့ဖြစ်နေမည်ဟုတိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန်က ပြောဆိုသည့်အကြောင်း ဆိုင်ရှင်ကြီးကရှင်းပြသည်။
ကောင်လေးက ပို၍ စိတ်ဝင်စားသွားသည်။
“ဒီခွေးလေး ကျွန်တော် ၀ယ်ချင်တယ်ဗျာ” သူကဆိုသည်။
“ဟာ…မ၀ယ်ပါနဲ့ကွ ၊ မင်း တကယ်လိုချင်ရင် ငါပေးပါ့မယ်”
သည်စကားကြားတော့ ကောင်လေး မျက်နှာပျက်သွားသည်။ သူက မကျေနပ်သည့် အမှုအရာမျိုး နှင့် ဆိုင်ရှင်ကြီးကို မော့ကြည့်ပြီး ပြန်ပြောသည်။
“အလားကားပေးတာကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး ခင်ဗျ ၊ ဒီခွေးလေးလဲ ကျန်တဲ့ခွေးတွေနဲ့ တန်းတူ တန်ဖိုးရှိတာပဲ ၊ တစ်ပြားသားမှ မလျော့ပါဘူး ၊ ကျွန်တော် တန်ဖိုးအပြည့်ပဲ ပေးမယ် ၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မှာ လောလောဆယ် ၂ဒေါ်လာနဲ့ ၃၇ဆင့်ပဲ ပါတယ် ၊ အခု အဲဒါ ယူထားပါ ၊ နောက်ကို တစ်လ ဆင့်ငါးဆယ်စီ ကျေတဲ့အထိ ကျွန်တော် ဆက်ပေးပါ့မယ်”
သို့သော် စတိုးဆိုင်ရှင်က အလျှော့မပေး။
“မ၀ယ်ပါနဲ့ ကလေးရ ၊ နောက်ကျတော့ မင်းစိတ်ပျက်သွားလိမ့်မယ် ၊ ဒီခွေးလေးက ပြေးနိုင်လွှားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ၊ မင်း နဲ့ ခုန်ပေါက်ကစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး”
သည်အခါကျတော့မှ ကောင်လေးက ဆိုင်ရှင်ကြီးကို မော့ကြည့်ကာ သူ့ဘောင်းဘီအောက်နားစကို လှန်၍ ပြရင်း လေသံတိုးတိုး နှင့် ပြောသည်။
“ကျွန်တော်လဲ ကောင်းကောင်းမပြေးနိုင်ပါဘူးဗျာ ၊ ပါပီလေးခမြာမှာ သူ့ကို ကိုယ်ချင်းစာမယ့် လူတစ်ယောက်တော့ ရှိဖို့ လိုမှာပေါ့” တဲ့။
ကောင်လေး၏ဘယ်ခြေထောက်ကလေးကအတော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပင် သိမ်နေကောက် နေကာလမ်းလျှောက်နိုင်ရန်အတွက် သတ္တုချုပ်တံများဖြင့် အားဖြင့်ပေးထားရလေသည်။
[မူရင်း။ ။ Dan Clark ၏ Puppies for Sale]
စာရိုက်ပြီးချိန်။ ။ ညနေ ၆း၂၀ မိနစ် ၊ ၁၃ ရက် ၊ မတ်လ ၂၀၀၈ ခုနှစ်
Comment posted by Matbepe( matKisype belan.website ), 02/06/2020 at 1:31am (UTC):
Sleeping Medicine 20mg Buy Case [url=http://buycialisuss.com]Cialis[/url] Lioresal Achat En France <a href=http://buycialisuss.com>viagra vs cialis</a> Over The Counter Medicine For Uti
Comment posted by Stevhism( stevknon belan.space ), 02/02/2020 at 10:29pm (UTC):
Diflucan Online With No Prescription [url=http://buycialisuss.com]Cialis[/url] Achat Cialis Kamagra <a href=http://buycialisuss.com>cialis cheapest online prices</a> Can Amoxicillin Test Positive For Cocaine
Comment posted by Lesdousia( lesflerve delays.website ), 01/19/2020 at 12:49pm (UTC):
Buy Clomid Safely Online Uk Paypal [url=http://cialibuy.com]Buy Cialis[/url] Purchasing isotretinoin skin health medication Clomid Et Utrogestan Levitra5Mg Foto
Comment posted by Ei Ei Thet( eieithetbagan2 gmail.com ), 04/22/2013 at 9:39am (UTC):
Comment posted by Eaindray Thet Paing( cubicstar2013 gmail.com ), 03/09/2013 at 1:30pm (UTC):
Comment posted by Wanna Kyaw( wannakyaw19 gmail.com ), 02/17/2012 at 3:25am (UTC):
Comment posted by saipyaesoneaung( ssaipyae gmail,com ), 07/22/2011 at 3:09am (UTC):
Comment posted by naing lay( shwegulay.npt gmail.com ), 11/08/2008 at 7:35am (UTC):
Comment posted by lolipop( lolipop.562 gmail.com ), 03/28/2008 at 12:03pm (UTC):
hello i read it out today these all are full with meaning And can get knowledge so i have good thing THANKS !